Myanmar categorically rejects the draft resolution on Situation of Human Rights in Myanmar at the 37th Session of HRC – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar categorically rejects the draft resolution on Situation of Human Rights in Myanmar at the 37th Session of HRC
During the discussion, Permanent Representative of Myanmar to the United Nations Ambassador U Htin Lynn deliveredastatement before taking action on the draft resolution, and categorically rejected the draft resolution highlighting paragraphs which are highly intrusive and directly challenging to the state sovereignty of Myanmar. He also updated the meeting of the progress being made on the ground and underlined factually and technically flawed paragraphs in the draft resolution.
In his statement, the Permanent Representative stressed that Myanmar, asayoung democracy, has been facing challenges in its march toademocratic society. However, such challenges will not derail the Government’s efforts in national reconciliation, peace, development and promotion and protection of human rights. While welcoming the constructive criticism by the international community, the Government will not accept any attempt infringing on the state sovereignty of Myanmar. Meanwhile, Myanmar is ready to work with the international community in their constructive approaches that would help Myanmar to overcome national reconciliation, peace, development and humanitarian challenges of the country.
The draft resolution was put toavote at the 47-member Human Rights Council, and adopted withavote of 32 in favour,5against, and 10 abstentions. China, Burundi, Cuba, the Philippines and Venezuela voted against the resolution in support of Myanmar. The other 10 countries (Angola, Democratic Republic of Congo, Ecuador, Ethiopia, Japan, Kenya, Mongolia, Nepal, Senegal and South Africa) did not support the EU’s resolution and abstained in the voting.
(၃၇) ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက ပြတ်သားစွာ ပယ်ချခဲ့ခြင်း
ဂျီနီဗာမြို့၌ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၃၇) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး အတွင်း ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)မှ အဆိုပြုတင်သွင်း သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်း တစ်ရပ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ဆွေးနွေးရာတွင် အဆိုမူကြမ်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးထင်လင်းက မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ၌ အဆိုမူကြမ်းပါ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရာရောက်သည့်စာပိုဒ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်သည့် စာပိုဒ်များကို ထောက်ပြလျက် မူကြမ်းအား လက်မခံကြောင်းနှင့် ပြတ်သားစွာပယ်ချကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်လွဲမှားနေသည့် စာပိုဒ်များကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပြီး မြေပြင်တွင် လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုလည်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာတွင် ဒီမိုကရေစီ သက်တမ်းနုနယ်သေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများကို ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယင်းစိန်ခေါ် မှုများကြောင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းနေမှုများကို လမ်းလွဲသွားစေမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ အပြုသဘော ဝေဖန်မှုများကို ကြိုဆိုသော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးစေမည့် မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုမျိုး ကိုမဆို လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အပြုသဘောဆောင်သော ချဉ်းကပ်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန် အသင့်ရှိပါကြောင်းတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုစေမည်မဟုတ်သည့်အပြင် အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွား လာစေမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အဆိုမူကြမ်းအား မဲခွဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အဆိုမူကြမ်းအား အဖွဲ့ဝင် (၄၇)နိုင်ငံပါဝင်သည့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတွင် မဲခွဲခဲ့ရာ၌ ထောက်ခံမဲ (၃၂) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၅)မဲ၊ ကြားနေမဲ (၁၀) မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ တရုတ်၊ ဘရွန်ဒီ၊ ကျူးဘား၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည် လျက် ကန့်ကွက်မဲ ပေးခဲ့ကြပြီး၊ အန်ဂိုလာ၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နီပေါ၊ တောင်အာဖရိက၊ ဂျပန်၊ ဆီနီဂေါ၊ ကင်ညာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အီကွေဒေါနှင့် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံတို့က အီးယူ၏အဆိုမူကြမ်းအား ထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ ကြားနေမဲ ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။